एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोधे, ‘दंगल’ हेर्नुभयो ?’ उनले भने, ‘छैन ।’ एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले सुझाए, ‘त्यसो भए हेर्नुस् ।’ उनले सहमति जनाए । आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताले अनुरोध गर्दासमेत उनले ‘दंगल’ हेर्ने फुर्सद पाएका छैनन् । खेलसँग सम्बन्धित भएकाले नेता नेपालले उनी अर्थात् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव केशव वि..
एसके लामा नदीको किनारबाट सभ्यताको विकास भएको मानिन्छ । मिश्रको सभ्यता नाइलनदी, सिन्धुभाषीक..
कम्युनिस्टले वर्गीयबाहेक जातीय कुरा गर्न मान्दैन,’ काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको बाबर्ची रेष्ट..
–लोकमान सिंह कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालतको पेशी कक्षभित्रै कालोमोसो दल्ने प्रयास गरेका विप्ल..
तराई–मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुको पनि चासो सम्बोधन गर्दै संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा..
आधा घण्टाको बाटोमा सात घण्टासम्म जाम काठमाडौँ– १२ किलोमिटर दूरीको त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडकको आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सकिने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । कलङ्की–नागढुङ्गा चार लेन र त्रिपुरेश्वर–कलङ्की ६ लेनको हुनेछ । दुई मिटरको ‘ग्रिनबेल्ट’, १.२ मिटर साइकल लेन र अपाङ्गमैत्री फुटपाथ सडकमा रहनेछ । तर, सडक निर्माणमा कैयौँ ज..
उसले मलाई कापीको पानामा लभलेटर दियो– अभिनेत्री असिस्मा
पछिल्लो समय उदाएकी अभिनेत्री हुन्– असिस्मा नकर्मी । म्युजिक भिडियो हुँदै ठूलो पर्दामा जम्प गरेकी उनी पछिल्लो समय फिगर कोकाकोला कारणले चर्चित छिन् । चलचित्र ‘अर्धकट्टी’ अभिनय सिलसिलामा उनले ‘फिगर कोकाकोला..’ बोलको गीतमा आइटम नृत्य गरेकी थिइन् । छोटो समयमै अन्तराल, बाटोमुनिको फूल–२, अर्धकट्टी, बुद्ध बर्न इन नेपाल, राधे, लभ यू बाबा..
काठमाडौँ– पछिल्लो एक महिनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा बारम्बार जोड दिएर उठाउँदै आएको एउटा विषय हो– माओवादीहरूबीचको एकता । एकताको विषयसँगै उनले आफूले सबै माओवादीधारका नेताहरूसँग नियमित संवाद गरेको पनि दाबी गरिरहेका छन् । विशेषगरी पार्टीका आन्तरिक प्रशिक्षण र कार्यक्रमहरूमा प्रचण्डले एकताबार..
खेलजीवनबाट सन्न्यास लिएका कीर्तिमानी खेलाडी दीपक विष्टले आफूभन्दा राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्ने अभियानमा लागेका छन् । दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा चार स्वर्ण पदक हात पारेका उनी ओलम्पिकमा छनोट हुने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुन् । एसियन्स गेममा दुई कास्य पदक हात पारेका उनले नेपालका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयमा समेत खेललाई अनिवार्य विषय ब..
१५ वर्ष । सम्भावना बोकेका मानिसले त्यस समयमा आफूलाई मन परेको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि धेरै पर जान पर्दैन । काठमाडौंको जोरपाटीसम्म पुगे थाहा पाइन्छ । जोरपाटीनिवासी तेक्वान्दो फोर डान रोमी गिरीले १५ वर्षमा धेरै काम गरेकी छन् । खेलमार्फत नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जापान र स्वीट्जरल्यान्डसम्म पुगेकी उनले तेक्वा..
राजेशको कपाल छुँदा पसिना छुट्यो, डरैडरमा सेबाजको पनि कपाल समाएँ हेयर स्टाइल मानिसको व्यक्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । यसले केही हदसम्म मानिसको चरित्र, काम र भूमिका प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ । सेलिबे्रटीका लागि अझ यसले विशेष महत्व राख्ने गर्छ । चर्चामा छाउनदेखि काममा बिक्नसमेत उनीहरूलाई यसले कुनै न कुनै कोणबाट सहयता गरिरहेको हुन्छ । ..
त्यसदिन जब राजा वीरेन्द्रले सोधे : रारा चाउचाउको लगानीकर्ता को हुन् ?
राजा वीरेन्द्र मुसुक्क हाँसे । किन ? ‘रारा चाउचाउको लगानीकर्ता को हुन् भनेर राजा वीरेन्द्रले सोधे,’ रारा चाउचाउ उत्पादन गर्ने गण्डकी नुडल्स प्रालि संस्थापक प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण आचार्यले उत्तर दिए, ‘सरकार, गोर्खाली सबै हुन् ।’ गण्डकी नुडल्स प्रालि संस्थापक प्रबन्ध निर्देशक आचार्यको उत्तर सुनेर राजा वीरेन्द्र हाँसे । रानी ऐश्वर्..
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका १३ भन्दा बढी जिल्ला र भारतको उत्तर प्रदेशका केही भूभागका समेत गरी ६० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या आश्रित छन् लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा । तर, अस्पतालमा बेथिति धेरै छ । अस्पताल आफै बिरामी छ ? के यसमा सुधार गर्न सकिन्छ ? बुटवलबाट पत्रकार तेजेन्द्र केसीको रिपोर्ट : सन्दर्भ १ –शुक्रबार बिहान ८ बजेर १५ मिनेट […]
लामो समय कांग्रेसमा काम गरेका महेश कर्मोचा नयाँ शक्ति पार्टीमा जोडिएका छन् । नयाँ शक्ति सहसंयोजक कर्मोचालाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने लोभ छैन । ‘नेपाललाई संसारको नमुना देश बनाउने सपना छ,’ नयाँ शक्ति पार्टी कार्यालय बबरमहलको आफ्नै कार्यकक्षमा उनले दाबी गरे, ‘मुलुकको विकासका लागि ‘एट हेम’ योजना मसँग छ । ‘ए’ फर एग्रिकल्चर, ‘ट..
‘सही निर्माण’ ले यसरी बनौँ धनी
‘हचुवाका भरमा भौतिक संरचना बनाउनु आउने पुस्तामाथि गरिने अपराध हो । कुनै पनि पुस्ताले आफूअघिका पुस्ताले गरेको गल्ती सच्याउन पैसा खर्च गर्नपर्यो भने उसले आफ्नो स्तरमा के खर्च गर्ने,’ होटल हिमालय कुपन्डोलमा भेटिएका विकासविद् होमराज आचार्यले सुनाए, ‘भूतकालका गल्ती सच्याउनमै उसले सारा खर्च गर्नुपर्छ । हामीले भूतकालका गल्ती इन्भिजन गर..
नायिका रेखा थापा माओवादी केन्द्र छाडेर राप्रपा नेपाल प्रवेश गरेकी छन् । मन्त्री बन्ने सपनासहित गायिका कोमल वलीले नायिका थापाभन्दा पहिले राप्रपा नेपालकै सदस्यता लिएकी छन् । एकताका एमालेनिकट अनेरास्ववियुको सक्रिय विद्यार्थी नेता कवि सरस्वती प्रतीक्षासमेत कुनै दलविशेषको सदस्य लिने विचारमा छिन् । त्यतिबेला अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी ..
हिट एन्ड फिट अभिनेत्री हुन्– केकी अधिकारी । नृत्यकलामा निपुण उनी चलचित्र, म्युजिक भिडियो, विज्ञापन चलचित्रलगायत चारैतिर छाउन सफल छिन् । उनी सबै निर्माता, निर्देशकको रोजाइकी हिरोइन् पनि हुन् । त्यसैले होला उनलाई अभिनयमा भ्याइ नभ्याइ छ । केही समय अगाडि दीपेन्द्र लामाको ‘घामपानी’को अभिनय सपन्न गरेकी उनी अहिले दिवाकर भट्टराईको ‘ऐश्व..
केपी ओली नेतृत्व सरकारमा शिक्षामन्त्री रहँदा उनले अस्थायी शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न शिक्षा ऐनमै ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ व्यवस्था गरे । त्यसअघि यसबारे चर्चा चले पनि ऐनमा उल्लेख थिएन । ऐन बनेपछि अस्थायी शिक्षकले केही राहत पाएका छन् । स्थायी शिक्षकका लागि परीक्षामा सहभागी नहुने शिक्षकले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ पाउने ऐनमा छ । उनले शिक्षक सरु..
सार्वजनिक रूपमा जसको नाम छ, त्यसको छवि बनाइन्छ । छवि भनेको ठूलो भुँडी, ठूलो घर, घरमा महँगो गाडी, भोटेकुकुर पालेको इत्यादि । त्यस्ता मानिस ठूला हुन् भन्ने नेपाली समाजको बुझाइ छ । साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाचाहिँ सार्वजनिक रूपमा नाम भएका मानिस हुन् । उनको चलेका सञ्चारमाध्यममा पहुँच छ । भाउ छ । आममानिसले उनको पाँचतले घर […]
नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीले जनकपुर र पोखरामा जानका लागि नेपाली विमान नै प्रयोग गरे, साथै माउन्टेन फ्लाइट पनि गरे । सुरक्षा र भरपर्दो एयरलाइन्स ठानेर उनले बुद्ध एयरमा यात्रा गरे । सन् १९९७ मा अक्टोवर ११ मा पहिलो उडान शुरु गरेको यो एयरलाइन्स नीजि क्षेत्रबाट चलेको नेपालको अग्रणी एयरलाइन्स हो । आठ […]
काठमाडौं– एउटा जमाना थियो, पूर्वको झापा र धरानतिरका भलिबल कोर्टमा ‘दोर्जे सट’ निकै चर्चित थियो । ‘दोर्जे सट’ प्रहार गरेपछि हुटिङ उस्तै हुन्थ्यो । विपक्षीले बल उठाउने हिम्मत गर्दैनथे । भलिबल कोर्टमा धुलो उड्थ्यो । झापामा एकपटक भलिबल च्याम्पियनसिप चल्दै थियो । मैदानमा ‘दोर्जे सट’को वर्षा हुनथाल्यो । ‘हामी म्याच हेर्न गएका थियौं’, ..
‘ए राता मकै’ कलाकारिताको सिलसिलामा यो थेगो बोल्ने कलाकार किरण केसीलाई नचिन्ने सायदै होलान् । हास्य शृङ्खला ‘जिरे खुर्सानी’मा उनले बोल्ने गरेको यो थेगो जति चर्चित छ । त्योभन्दा बढी लोकप्रिय छन् केसी । मह जोडीदेखि नयाँ पुस्ताका जितु नेपालसम्मका कमेडी शृङ्खलामा काम गरिसकेका केसी व्यक्ति एक हुन् तर उनका परिचय अनेक छन् । करिब [&helli..
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जबेगूको जीवन : प्रेम गरेकोसँग बिहे नभए पनि सम्झना आउँछ
२०३५/३६ सालतिर तात्कालिक मालेका ठुल्ठूला नेता पाँचथरका याङ्नामसम्म पुग्थे । उनीहरुले लुकीछिपी कम्युनिस्टबारे सुनाउँथे । कम्युनिस्टले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले उनलाई छोयो । गाउँमा कसैको घरमा मासुभात पाक्ने, कसैकहाँ खोले (जाउलो) पनि नपाक्ने अवस्था थियो । अभावमा बाँचेको मानिसलाई कम्युनिस्ट पो बन्नुपर्दोरहेछ भन्ने लाग्यो..
चितवन– मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डमा हाकिम कति बिन्दास छन् । तपाईंले पढ्नुभयो । छुट्याउनुभएको भए यो समाचार पढ्नुहोला । हाकिम बिन्दास भए पनि मजदुरका दुःख धेरै छन् । हामीले यो सडक खण्डको अनुगमनमा देख्यौँ । यहाँ चौबीसै घण्टा निरन्तर गुड्छन् दसौं हजार सवारीसाधन । धुलो र धुवाँ मिसिएको हावा, चट्टाने पहरामुनि पहेँलो हेल्मेट र सुन्तला रङ..
काठमाडौं – मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डका ‘एम्वुस’ जस्ता पुलको अबस्था तपाईले पढनुभयो, तस्वीर हेर्नुभयो र भिडियो पनि देख्नुभयो । यो क्षेत्रमा कति जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ र कति धेरै दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र छन्, त्यो पनि तपाईंलाई देखायौँ । एकातिर जोखिम र खतरा छ भने अर्कोतिर आशा पनि छ । आशा यसकारण कि ३३ किलोमिटर मुग्लिन–नारा..